Jowhar.com - Somali news Leader - News: Faransiiska oo ku soo biiray dalalka doonaya in Tallaabo Milateri laga qaado Suuriya
December 12 2013 02:48:44
Faransiiska oo ku soo biiray dalalka doonaya in Tallaabo Milateri laga qaado Suuriya
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya inay adeegsaday Hubka kiimikada, kaasoo ay ku dhinteen boqolaal ruux arbacadii weerar ay ku qaadeen Bariga Dimishiq.
Francois Hollande ayaa ku baaqay in cidii ka mas'uulka aheyd ficilkaas laga qaado tallaabo, isla markaana si xun loo ciqaabo.
"Waa in si xun loo ciqaabo cidii mas'uulka ka aheyd weerarada loo adeegsaday hubka kiimimada, waa in tallaabo adag laga qaado"ayuu hadalkiisa ku cel celiyay Francois Holland oo Wariyeyaasha kula hadlay Paris mar sii horeysay oo maanta aheyd.
Dowladaha reer Galbeedka ayaa ka fikiraya fara gelin deg deg ah oo ay ku sameeyaan Suuriya, kadib markii ay ku eedeeyeen inay adeegsatay Hubka Kiimikada.
Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaariyay ciidamadii weerari lahaa Suuriya, halka dowladda Britain ay ka sugeyso Baarlamaankeeda inuu u codeeyo fara gelin milateri oo lagu sameeyo Suuriya.
Wasiirka Arrimaha dibada Suuriya Walid Al Muallem ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Dimishiq waxaa uu sheegay in dalkiisa is difaaci doono hadii la soo weeraro, ayna adeegsan doonaan wax walba oo suura gal ah oo ay isku difaaci karaan.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka digaya fara gelin milateri in xilligan lagu sameeyo dalka Suuriya oo muddo labo sano kadib dagaalo iyo rabshado u dhaxeeya dowladda keli taliska iyo Mucaarad is baheystay oo islaamiyiin ku jiraan uu dhex marayo.
Tallaabo Milateri oo soo deg degta oo ka timaada dalalka reer Galbeedka ayaa suura gal ka dhigi karta in dalalka inuu saameeyo Bariga Dhexe, iyadoo dalka deriska la ah Suuriya ee Iiraan ay keeni karto inuu dagaalka saameyn ku yeesho ama ku soo biiro.
jowhar.com3,170,898 unique visits